Post fotoana: 06-06-2018
Robit nilaza fa hanamafy izany dia be ny raharaham-barotra DTH faritra, ary ny roa novidiny, ny orinasa fitambaran'ny aterineto varotra dia ho lehibe noho € 75 tapitrisa (US $ 83 tapitrisa). Araka ny Robit, ny novidiny no ampahany manan-danja ny fitomboany eran-paikady, ary dia looki ...Lire la suite »
Atlas Copcoconsolidates asa fitrandrahana Shinoa
Amin'ny vahoaka nanao hetsika hampitombo ny fahombiazany sy ny hanamafy orina ny orinasa ho amin'ny ho avy. Atlas Copco dia hanakatona ny toerana ao Shenyang, izay manufactures-tanana natao indrindra indrindra vatolampy drills ho an'ny harena ankibon'ny tany sy ny fanorenana, namindra toerana an'ireo asa ho an'ny zavamaniry ao Zhangjiakou. Ao Shenyang, tokony ho 225 pe ...Lire la suite »
Sompanga discontinues drills lalana, sy ny tsangam-bato efitrano misakana orinasa mpamokatra entana
Nilaza ilay orinasa fa trandrahana safidy stratejika no mamela azy io hifantoka amin'ny vokatra ireo amin'ny fitomboana lehibe indrindra mety. Sompanga koa fa ny orinasa sy ny mpivarotra ny voady nifanaovanareo efa misy mpanjifa sy hanohana ireo efitrano sy ny tsangam-bato sy ny lalana fandavahana fleets amin'izao fotoana izao ...Lire la suite »